Kwụsị Bọmbụ Spam Na Shiol
Ọ dị mkpa igbochi okporo ụzọ ọjọọ nke na-egbochi gị ịbịaru saịtị gị ma gosipụta echiche na-adịghị adị na Google Analytics. Nke mbụ, ị ga-aghọta ma ụgbọelu gị na-abịa site na Google ma ọ bụ bọọlụ. Ọ bụrụ na ị hụ nhụjuanya a na-atụghị anya ya na okporo ụzọ, ọ nwere ohere na ọ bụghị ihe ziri ezi ka ị na-emeghị SEO n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na nchịkọta Google, ị ga-aga na ngalaba okporo ụzọ okporo ụzọ ma chọpụta ogo okporo ụzọ nakwa adreesị IP - ejector venturi design. Ndị na-arụ ọrụ na weebụ, ndị na-arụ ọrụ igwefoto ma ọ bụ ndị na-emepụtaghachi onwe ha: ị nwere ike ịkọ ha ihe ọ bụla kama ha agaghị eleghara eziokwu ahụ anya na ngwanrọ na-eji Web Wide Web dị ka ụmụ mmadụ n'ezie. N'ụzọ dị mwute, ha anaghị enye uru na ebe nrụọrụ weebụ gị ma na-eme ka hà na-eme dịka ndị mmadụ, na-enye gị ọtụtụ nlele. N'aka nke ọzọ, o nwere ike ọ gaghị ekwe omume na onye ọ bụla ga-ebufe ọtụtụ nzụfe ya na ebe nrụọrụ weebụ ya n'ihi asọmpi dị elu. Ị nwere ike ịkwụsị mgbalị gị site n'inwe bọọlụ nwere ike debanye aha gị na saịtị search engine . Google naanị achọ njikọ na ibe nke na-enye ndị ọrụ ezigbo ozi. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nkwụsịtụ ndị dị ka ụmụ mmadụ dị adị, ị ghaghị ịchọta ihe ngwọta na forums ebe a na-ekwukarị ihe ndị na-egbochi spam. Ọ bụrụ na ike gwụrụ ndị na-enweghị ike ịhụ anya, a na-emepụta bọtịnụ na malware iji nye echiche ihuenyo, ihe ndị na-adịghị mma, na ikekwe njikọ njikọ, pịaghị gị.
Obi dị m ụtọ, ọ ga-ekwe omume ịkwụsị bọọlụ na spam site na iburu ihe ole na ole dị mkpa n'uche. Na nke a, Max Bell, Semalt Onye Ahịa Ọrụ Nlekọta, nyere gị ka ị tụlee ndụmọdụ ndị a:
Nsogbu na bọtịnụ
Ị nwere ike ịghọta ezigbo nsogbu nke bọtịnụ naanị mgbe ị tụlere ụfọdụ n'ime ihe atụ..Ihe atụ mbụ bụ na ọ bụrụ na ị nwere bọtịnụ Google, a na-emekarị ha iji nye gị echiche ndị mmadụ. I nwekwara ike ịta ahụhụ site na bọtịnụ ndị a na-amanye iji mee ka ị nweta ume weebụ gị. Ha abụọ na-aga na saịtị gị, mgbasawanye na nchịkọtawanye abawanye. Ha nwere ọnụ ọgụgụ dị elu dị elu ma nọrọ obere oge na ibe weebụ. Nanị ọdịiche dị n'etiti bọtịnụ abụọ a bụ na bọtịnụ Google na-eme ihe bara uru, na-enye data azụ iji depụta saịtị gị, ebe bọtịnụ na-eme ka ọnụọgụgụ ọnụ ọgụgụ gị dị ukwuu, na-etinye ihe mmemme gị n'ihe ize ndụ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịmata ndị bọọlụ ahụ ma gbochie ha ngwa ngwa o kwere mee. Ikwesighi ime otutu ihe dika Google nyere otutu ihe omume na ngwa oru iji mee ka oru gi di mfe. Ndị Spammers nwere ike igbochi bọọ ha ruo oge ụfọdụ, ma nkwụsị n'akụkụ gị kwesịrị ịdịgide adịgide maka nkwupụta dị mma.
Na-egbochi okporo ụzọ ụgbọala na-adịghị mma
Ị nwere ike igbochi ụgbọ okporo ụzọ achọghị ya na faịlụ .htaccess. Ọ bụrụ na ị igbochi bọọlụ na faịlụ ndị a, ị ga-enwe ike melite arụmọrụ zuru oke nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Iji usoro a, ị nwere ike igbochi bọọlụ ndị a pụrụ ịmata ma mara dị ka spambots. Ọ bụrụ na bọtịnụ ahụ mara onwe ha dị ka ndị ọrụ ziri ezi, ị ga-aka mma igbochi adreesị IP ha n'oge o kwere omume. Ị nweghị ike igbochi bọọlụ niile ahụ ruo mgbe ị kpebiri adreesị IP ha ma dozie ntọala na ụlọ ọrụ weebụ gị.
Ụzọ ọzọ na-egbochi bọọlụ site na iji faịlụ .htaccess gị. Ọ dịkwa mkpa ka ị gbochie ọtụtụ adreesị IP dịka o kwere mee, ma ọ bụ dochie anya adreesị IP ahụ dị nchedo na nchekwa ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress, ị ghaghị ijide okporo ụzọ ọjọọ dị ka nke a bụ ikpo okwu ebe ndị omempụ na-awakpo faịlụ ahụ n'ọtụtụ buru ibu. Ị nwere ike idezi faịlụ .htaccess gị, ma tinye koodu dị iche iche ichebe na ịntanetị.